Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Golaha Shacabka oo kulan la qaatay Agaasimaha Hay’adda Socdaalka – Kalfadhi
Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Golaha Shacabka oo kulan la qaatay Agaasimaha Hay’adda Socdaalka
Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan kula yeeshay xarunta Villa Hargeysa Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Col. Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi).
Kulanka ayaa looga hadlay katashiga Sharciga Socdaalka oo horyaalla Guddiga, kaas oo dhawaan loo gudbin doono Baarlamaanka kaddiba ay ka doodaan.
Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Col.Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) ayaa Guddiga sharaxaada ka siiyay sharciga Socdaalka, waxaana uu la wadaatay tallooyinka uu ku darayo Sharciga.
Xubnaha guddiga ayaa agaasimaha weydiiyay su’aalo la xarriiro sharciga Socdaalka. Ku-simaha Guddoomiyaha ahna guddoomiye ku xigeenka Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga Xildhibaan Maxamed Cabdulle faarax (Geesey), ayaa Agaasimaha iyo xubnaha guddiga la wadaagay sida ay muhiim u tahay ansixinta sharciga, kaas oo muddadii ugu dambeysay Baarlamaanka ay ka doodayeen.
Baarlamanka Soomaaliya: Maxay tahay sababta la isugu khilaafay xeerkan dembiyada “Galmada”?